Griffin PowerDock 5, famahanana base ho an'ny fitaovana 5, efa misy | Vaovao IPhone
Natolotra tao amin'ny CES 2013, i Griffin dia efa nametraka ny tobim-pahefana PowerDock 5. Inona no mampiavaka an'io fitaovana vaovao io? Eny, miaraka amin'ny habe mitovy amin'ny an'ny iPad, mamela ity base ity Miaraha miasa miaraka amin'ny fitaovana 5 miaraka: iPhone, iPad, iPod, iPod touch ... ny zava-drehetra dia tafiditra ao amin'ity PowerDock 5 ity noho ireo fifandraisana USB 5 manome 10 watts tsirairay avy, ary ahafahanao mampifandray tariby misy (tselatra, pin 30, microUSB ...) amin'ny ampandoavinao ny fitaovana misy anao, na dia ireo tsy an'ny Apple aza.
Nandritra ny volana maromaro dia nampiasa fototra mitovy amin'izany aho, la Quirky Converge, izay "ihany" dia mamela ahy handoa fitaovana 4, ary na dia toa fampiasa tsy misy fampiasana be aza izy ireo dia tena afa-po amin'ny fividiananao aho. Rehefa avy niaritra ny fiovan'ny mpampitohy an'i Apple aho dia hieritreritra be momba ny fividianana kojakoja an'ity karazana ity amin'ny mpampitohy "manokana" izay tsy maintsy esoriko rehefa te hanova ny mpampifandray azy indray i Apple, na raha manapa-kevitra ny hividy aho smartphone na tablette avy amin'ny marika hafa. Tombony lehibe iray hafa amin'ireo kojakoja ireo ny ankoatry ny famoahana fitaovana dia avelany hapetraka amin'ny toerana iray izy ireo ary tsy hiparitaka eraky ny efitrano.
Ao amin'ny trano firy no efa misy iPhone sy iPad maro? Sa smartphone sy tablette maromaro? Misaotra ny PowerDock 5 azonao atao ny manadino mitady socket hanefena azy ireo tsirairay. Amin'ny lafiny ratsy, tsy isalasalana, ny vidiny, izay mitentina $ 99,99 izay tsy maintsy ampiana $ 12,30 ho an'ny vidin'ny fandefasana any Espana. Raha ampianay amin'izany fa mila ny tariby mandefitra isaky ny fitaovana ianao dia tsy isalasalana fa tsy maintsy mieritreritra in-droa ianao alohan'ny hividianana azy. Ny tobin'ny Quirky Converge ahy, na dia tsy mora aza, dia manana vidiny ambany be, eo amin'ny 40 euro ao anatin'izany ny vidin'ny fandefasana.
Fanazavana fanampiny - Famerenana ny base multi-load Quirky Converge
Loharano - Griffin
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Griffin PowerDock 5, famahanana base ho an'ny fitaovana 5, efa misy izao
Fampianarana: Ahoana ny fomba hitsitsiana ireo sarintany avy amin'ny Google Maps ivelan'ny toerana